Nezvedu - Daking Jewelery Co, Ltd.
Inowanikwa muZhangjiagang, guta rechiteshi pedyo neShanghai, padivi peYangzi River, Zhangjiagang City Daking Jewelery Co, Ltd. yakavambwa muna 1992. Isu tanga tichiita zvekurima maparera, kugadzira. pamwe nesemari-inokosha mabwe uye zvishongo zvemafashoni kweanopfuura makore makumi maviri nemasere.
Tine purazi redu rekurima maparera rine nzvimbo dzinofukidza mvura dzinopfuura mazana matanhatu emakiromita mazana manomwe neshanu, pamwe nefekitori yekugadzira, uye kugona kwedu kwekugadzira kwepagore kwakasvika anopfuura matani zana ematani. Isu tinogadzira ese maviri-akapera zvigadzirwa uye akapedza zvigadzirwa.Yedu fashoni zvishongo zvigadzirwa zvakasiyana, zvinosanganisira maketani, zvishongo, mhete uye zvishongo seti.Pane zvinopfuura zviuru zvisere zvemadhizaini. Kupfuura anopfuura makumi maviri emakore budiriro, kambani yedu yaunza hunyanzvi hwekukora uye kudhaya tekinoroji uye yagadzira yekugadzira mutsetse, pamwe neyakaganhurirwa yemhando yekudzora uye manejimendi sisitimu.Futhermore, kambani yedu ine vanoshanda zvakanaka vechikwata. Kugutsikana kubva mudzimba nekunze kwemakungwa Kwemakore makumi maviri nematatu apfuura, zvigadzirwa zvedu zvakaendeswa kune dzimwe nyika dzakawanda pasirese.Nokupa mitengo inonzwisisika uye nebasa rakanakisa, kambani yedu yakagamuchira kurumbidzwa kubva kune vatengi vedu pasirese. Izvi zvinotibatsira kuwana mukurumbira wepamusoro mumisika yepamba neyekunze.Tiri kuramba tichiwedzera bhizinesi redu uye tichiedza nepatinogona napo kupa zvirinani uye zvirinani zvigadzirwa uye sevhisi kune vese vatengi.Tichitarisa mune ramangwana, tichaedza zvisingaite kupa mhando dzakanaka zvigadzirwa. vakazvipira kupa kune indasitiri yezvishongo nekutenda kwakanaka, mupiro uye mweya wekushinga.
Kutora Jewelery Co, Ltd.
Isu tinobata mumaparera emhizha, zvigadzirwa zvegobolondo, matombo akakosha semi uye zvichingodaro
Bhizinesi Rezvematongerwo enyika
Mukuenderana nehurongwa hwebhizinesi re "rinotarisirwa nevatengi, kuhwina-kuhwina nevatengesi", kambani yakanyatso kudzora mhando yezvigadzirwa.
Iyo kambani inonamira kukoshesa kukuru kune kwakasanganiswa kwakasarudzika kwechinyakare uye chazvino zvishongo, zvakanakira uye hunyanzvi, tekinoroji nehunyanzvi.
Isu tine nyowani dhizaini dhizaini, inoshanda inoshanda timu, inogara inotevedzera kune yakajairwa mashandiro, kutendeka sevhisi, izvo zvinodiwa uye kugutsikana kwevatengi pakutanga.
Chigadzirwa chekambani chakapfuma, zvakasiyana, kugadzirwa kwehuro, zvishongo, zvishongo, zvishongo, mhete, mhete, maketani, masutu mapfumbamwe, huwandu hwakawanda hweanopfuura masere masere masitaira ezvigadzirwa.
Iyo kambani ine nyowani dhizaini dhizaini, inoshanda inoshanda timu, inogara inoteedzera kune yakajairwa mashandiro, kutendeseka sevhisi, isa mutengi zvinodiwa uye kugutsikana munzvimbo yekutanga, yakunda kurumbidzwa kwevatengi kumba nekune dzimwe nyika.
Aquaculture nzvimbo yemvura
+ mativi akaenzana
Kutora vashandi vachiri kuomerera kumweya wekutsungirira, kushanda nesimba uye kukwana
Aripi Maziso Edu
Isu tinoteerera kunheyo ye "mhando yekurarama, mukurumbira wekuvandudza"
Nekuvimbika kune vatengi uye nekungwarira kwebasa, isu tinovavarira kufambira mberi mune iri bhizinesi bhizinesi.
Kana iwe uchifarira chero zvigadzirwa zvedu, ndapota taura nesu munguva. Isu tinotarisira nemoyo wese kushandira pamwe newe kuti tibatane mukudziridza musika wezvishongo uye nekugadzira ramangwana rakajeka reindasitiri yezvishongo.